Forza Horizon5ဂိမ်းထဲက Mercedes AMG Project! – MyMedia Myanmar
Forza Horizon5ဂိမ်းထဲက Mercedes AMG Project!
Gaming Console မျိုးဆက်သစ်တွေ ထွက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာနဲ့ Racing Games မျိုးဆက်သစ်တွေပါ နောက်က လိုက်ထွက်လာတယ် ဆိုတာကို အမြဲတမ်း ပြသနေတာပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ် ဒီနှစ်ထဲမှာလည်း အစဉ်အလာကို ဂိမ်း လောကထဲ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းလာနေဆဲပါ။ မနှစ်ကပဲ XBox Series S/X Gaming System အသစ်တွေ ထွက်လာ ခဲ့ပြီး အခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ထဲမှာပဲ နာမည်ကျော်ဗွီဒီယိုဂိမ်းဖြစ်တဲ့ Forza Horizon အသစ်ပါ ဆက်တိုက်‌ထွက်ပေါ် လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု တစ်ကြိမ်မှာတော့ Open World ပြိုင်ကား ဂိမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံရဲ့ နေရာတွေကို အခြေပြုကာ ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီး ကားသစ်တွေလည်း အများကြီးထည့်သွင်းပေးလာသလို Mercedes AMG Project One လို့ဆိုတဲ့ Forza Horizon Edition Hypercar လည်း ပါဝင်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအသစ် ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ၈ မိနစ်ကြာ Trailer မှာတော့ ရရှိလာနိုင်မယ့် ကားသစ်တွေ ကို ဦးစားပေးထားပေမယ့် တကယ်တမ်း ဇာတ်လိုက်ကျော်ကတော့ AMG Project One ပါပဲ။ အဆိုပါ ကားသစ်ကိုတော့ Forza Horizon အပိုင်းသစ်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်တဲ့ Final Leg မှာ မောင်းနှင် ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် တော့ အဆိုပါ ကားကို ဂိမ်းထဲမှာ ကောင်းကောင်း အစွမ်းပြနိုင်ဖို့ အတွက် Mercedes နဲ့ Microsoft တို့ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင် နေပြီ ဖြစ်သလို အစီး ရေကတော့ ၂၇၅ စီး အထိပဲ ကန့်သတ် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကားလည်း ဖြစ်ပါ တယ်။
တကယ်တော့ အဆိုပါ Hypercar ကို မာစီးဒီး အနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ကတည်းက ကြေညာထားခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့် အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းတွေကြောင့် ထွက်ပေါ်လာဖို့ ဆက်တိုက် နှောင့်နှေးမှုတွေ ကြုံခဲ့ရတာပါ။ F 1 ဆီက ယူဆောင်ထားတဲ့ 1.6 Liter Turbocharged V6အင်ဂျင်နဲ့အတူ ပုံမှန်ထက် အများကြီးတိုးတက် လာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ အင်ဂျင်ကိုမှ လျှပ်စစ်မော်တာ ၄ လုံးတပ်ဆင် ပေါင်းစပ်ထားပြီး စွမ်းဆောင်ရည်အနေနဲ့ 1,000 hp ( 745 kW ) အထိကို ရှိလာတာပါ။ Microsoft ကတော့ သူတို့ရဲ့ ဂိမ်း ထဲမှာလည်း အဆိုပါကားရဲ့ Active Aerodynamic တွေကိုပါ ပါအောင် ယူဆောင်လာပေးတာ ဖြစ်ပြီး Digital Top Speed အနေနဲ့ ဆိုရင် တစ်နာရီ ၂၁၇ မိုင်နှုန်း ( ၃၅၀ ကီလိုမီတာ ) အနေနဲ့ မောင်းနှင်နိုင်မှာပါ။ သေချာတာကတော့ လူအတော်များများအတွက် Hypercar တစ်စီး မောင်းခွင့်ရဖို့ အိပ်မက်က ဒီနေရာမှာ ပိုဖြစ်လာ နိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် Forza Motorsport ဆိုတဲ့ ဂိမ်းအသစ်မလာခင်မှာ အခု Forza Horizon5က တကယ်ကို စိတ်ကျေနပ်စရာ ကောင်းစေမှာ ဖြစ်ပြီး ဂိမ်းထဲကိုလည်း ဒီထက် ပိုကောင်းအောင် အများကြီး ဖန်တီးပေးလာ ဦးမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ ယခင် ဂရိတ် ဗြိတိန်နေရာတွေ အခြေပြုခဲ့တဲ့ Forza Horizon4နဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ အခု မက္ကဆီကို အပိုင်းမှာ ပိုပြီးတော့တိုးတက်ကောင်းမွန်လာတာပါ။ များသောအားဖြင့် ဂိမ်းထဲမှာ အမြဲစိမ်း သစ်တောတွေ ၊ Mayan Ruins တွေ သဲသောင်ပြင် ကမ်းခြေတွေနဲ့ မီးတောင် အပြင် နောက်ထပ် အပြင်လောကအတိုင်း စိတ်လှုပ်ရှားစရာ တွေ ထည့်သွင်း ပေးထားသလို အသစ်အသစ်သော Game Modes တွေနဲ့ ယခင် လက်ရာကောင်း တွေလည်း ပြန်လည် ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Forza Horizon5ကတော့ Xbox Console တွေဆီမှာ ရရှိလာမှာ ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးပေါ် မျိုးဆက်သစ် XBox One နဲ့ Microsoft Windows ဆီမှာလည်း လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ ကျရင် ရရှိလာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ XBox Game Pass မှာလည်း အဆိုပါ ဂိမ်းကို ရရှိလာတော့မှာ ဖြစ်ကာ စတင် ထွက်ရှိလာတဲ့ နေ့ကစလို့ လစဉ်လတိုင်း ငွေပေးချေမှု စနစ်နဲ့ စတင်ကစားနိုင် တော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post Forza Horizon5ဂိမ်းထဲက Mercedes AMG Project! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-08-26T17:00:30+06:30August 26th, 2021|MYCARS MYANMAR|